မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာ
မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာ
Posted by True Faith on Jul 29, 2010 in Myanma News |6comments
မြောက်ကိုရီးယား ၀န်ကြီး မြန်မာပြည် ရောက်ရှိ
၂၇ နှစ်ကျော်ကြာအောင် နှစ်နိုင်ငံ သံတမန် ဆက်ဆံရေး ဖြတ်တောက်ထားသည့် မြန်မာနှင့် မြောက်ကိုရီးယားတို့ ပြန်လည် ဆက်သွယ်ခဲ့သည့်အနေဖြင့် မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ပတ်ဝေ့ချွန်း Pak Ui-chun သည် ယနေ့ နံနက်ပိုင်းက မြန်မာနိုင်ငံသို လေကြောင်းဖြင့် ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။
ယင်းမှာ ၁၉၈၃ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် မြန်မာနှင့် မြောက်ကိုရီးယားတို့ ပထမဆုံး သံတမန်ရေးရာ ပြန်လည်ဆက်ဆံခြင်းဖြစ်သည်။
မြောက်ကိုရီးယားဝန်ကြီး မစ္စတာ ပတ်ခ်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၄ ရက်ကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပြီး နေပြည်တော်တွင် နအဖ ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေအပါအ၀င် အခြား ထိပ်သီး စစ်ခေါင်းဆောင်များနှင့် တွေ့ဆုံသွားရန်ရှိကြောင်း သိရသည်။
မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Ms. Pak Ui - chun
ယနေ့တွင် မစ္စတာ ပတ်ခ်သည် ရွှေတိဂုံဘုရားသို့ တက်ရောက်ဖူးမျှော်ပြီး အမျိုးသားပြတိုက်ကို ကြည့်ရှုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် မြောက်ကိုရီးယား၏ အကူအညီကို ရယူ၍ မြောက်အောက်လှိုဏ်ခေါင်းများ တူးဖော်ခြင်းနှင့် နျူကလီးယား စီမံကိန်းများလုပ်ဆောင်နေသည်ဟု မကြာသေးမီ ကာလက သတင်းများ ထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။ သို့သော် မြန်မာက အဆိုပါ သတင်းများ မဟုတ်မှန်ကြောင်း တရားဝင် ငြင်းဆိုထားသည်။
မြောက်ကိုရီးယားသည် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ခေါင်းဆောင် ချန်ဒူးဝှမ် ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်မြို့ အာဇာနည်ကုန်း၌ ဗုံးခွဲလုပ်ကြံခဲ့သဖြင့်
ထိုစဉ်က အုပ်ချုပ်နေသည့် ဦးနေ၀င်း၏ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီအစိုးရက နှစ်နိုင်ငံ သံတမန် ဆက်ဆံရေးများ ဖြတ်တောက်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ ဗုံးခွဲမှုကို မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ ဗိုလ်မှူး ၁ ဦးနှင့် ဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိသူ ၂ ဦး စေလွှတ်လုပ်ဆောင်စေခဲခြင်း ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ ၃ ဦးအား မြန်မာအာဏာပိုင်များက ဗုံးခွဲပြီး မကြာမီ အသေဖမ်းဆီး ရမိခဲ့သည်။
မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရသည် အာဇာနည်ကုန်း ဗုံးခွဲမှုနှင့်ပက်သက်၍ ၁၉၈၃ ခုနှစ်မှ ယနေ့အထိ မြန်မာအစိုးရအပေါ် တစုံတရာ တရားဝင် တောင်းပန်ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။
ကိုးကား – BBC and Mizzima
CHINA. INDIA, NORTH KOREA ၀ိုင်း လုကြပေါ့။
South Korea က ဗုံးပြန်ထောင်ရင် ကောင်းမယ်။ သန်းရွှေ ပါသေသွားအောင်
ဆရာကြီးဂိုဏ်းချုပ်တွေဆိုတော့ နှစ်ယောက်စလုံးကခင်ကြတယ်လေ သိတယ်မလား ဆရာကြီးဂိုဏ်ချုပ်
One of N. Korean agent was captured alive. His name is Kim Min Chu and U Win Tin briefly mentioned about him in the book ‘What the man-made hell’.(page 247) I am not sure this Korean agent is still alive.
အထက်ပါသတင်း၏ အောက်ဆုံးမှ ရေတွက်လျှင် ဒုတိယမြောက် အပိုဒ်၌ ရေးသားထားသည့် “၎င်းတို့ ၃ ဦးအား မြန်မာအာဏာပိုင်များက ဗုံးခွဲပြီး မကြာမီ အသေဖမ်းဆီး ရမိခဲ့သည်။” အစား “၎င်းတို့ ၃ ဦးအနက် ၁ ဦးကို သေဆုံးလျှက်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ ၂ ဦးကို ဒဏ်ရာများဖြင့်လည်းကောင်း မြန်မာအာဏာပိုင်များက ဗုံးခွဲပြီး မကြာမီ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်” ဟု ပြင်ဆင်ဖတ်ရှုပေးပါရန်။